Ity misy lisitry ny ohatra amin'ny tantaran'ny Instagram sy fandinihana tranga | Martech Zone
Nizara lahatsoratra teo aloha izahay, Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny tantaran'ny Instagram, fa ahoana no ampiasan'ny marika azy ireo hitarika ny varotra sy ny varotra? Araka ny #Instagram, ny 1 amin'ny 3 amin'ireo tantara be mpijery indrindra dia avy amin'ny orinasa
Statistika momba ny tantara Instagram:
Mpampiasa 300 tapitrisa no mazoto mampiasa tantara isan'andro ao amin'ny Instagram.
Maherin'ny 50% amin'ireo orinasa ao amin'ny Instagram no nanao tantara Instagram.
Mpampiasa Instagram mihoatra ny 1/3 no mijery ny tantara Instagram isan'andro.
20% ny tantara navoakan'ny orinasa dia niafara tamin'ny fifandraisana mivantana tamin'ny mpampiasa.
1 tapitrisa ny mpanao dokambarotra mavitrika manana fidirana amin'ny Instagram Story Ads.
Ireo orinasa dia nanatsara ny firotsahana saika 20% rehefa nampiantrano mpiasa na influencer tao amin'ny Instagram Story nandritra ny andro vitsivitsy.
Ka manao ahoana ny fametrahana ny marika Instagram Stories hiasa ho azy ireo? Ireto misy fomba 7 ampiasain'ny marika ireo tantara mba hampitomboana ny fahatsiarovan-tena, ny firotsahana ary ny varotra miaraka amin'ireo mpampiasa Instagram:
Fampiroboroboana ny vokatra - 36% amin'ny tantara rehetra no mampiroborobo mivantana ny fivarotana vokatra na serivisy.
Fijery anaty - 22% amin'ny tantara rehetra no manome fidirana amin'ny atiny tsy hita na aiza na aiza.
Fanararaotana Influencer - 14% amin'ny tantara rehetra no mampiasa Influencer mba hampiroboroboana vokatra na serivisy.
Live Event - 10% amin'ny tantara rehetra dia hetsika mivantana atao.
Ahoana no - Ny 5% amin'ny tantara rehetra dia horonan-tsary ahoana.
Votoatin'ny mpankafy - Ny 4% amin'ny tantara rehetra dia misy ny fijerena fijoroana ho vavolombelona sy ny fijoroana ho vavolombelona an'ny mpanjifa.
fifaninanana - Ny 2% amin'ny tantaran'ny Instagram rehetra dia momba ny fifaninanana anaty.
Other - 7% amin'ny tantaran'ny Instagram dia karazana tantara hafa.
99misy namorona an'ity sary tsy mampino ity, Ahoana ny fampiasan'ny orinasa ny tantaran'ny Instagram - fandinihana tranga 30, mba hahafahanao mianatra bebe kokoa momba ny fampiasan'ny orinasa hafa ny Tantara hanomezana feo sy toetra ny marika misy azy ireo. Ny marika dia misy Mercedes-Benz, DriveNow, Enel, AirPlay, Ticket.com, Country Road, Tokopedia, HiSmile, McDonald's, Asos, CoverGirl, Lego, Michael Kors, E! Vaovao, Maybelline, Twitter, Nordstrom Rack, Brunch Boys, NASA, Buffer, Airbnb, MSNBC, Ankoatr'izay, Glossier, IBM, Sakafo iray manontolo, Wines Valley Spy, MAC Cosmetics, Brit + Co, National Geographic, Reebok, Adidas, Aldo, Ulta , Sephora, Lowe's, American Eagle, Old Navy, ary Gap.
Tags: 99misyAdidasAirbnbAirPlayAldoVoromahery amerikanaASOSBrit + CoBrunch Boysbuffertranga fanadihadianatranga fianaranaLand RoadCoverGirlDriveNowE! NewsEnelkoaGapGlossierHiSmileIBMinstagram storiestantara instagramLegoLowe nyKosmetika MACMaybellineny McDonaldMercedes Benzmichael korsMSNBCNASANational GeographicNordstrom RackOld Tafika an-dranomasinareeboksephoraMpivady lohasaha mpitsikiloTicket.comTokopediaTwitterUltSakafo manontolo